Ọchịchọ maka smartwatch na-abawanye na ekeresimesi karịa 100% | Akụkọ akụrụngwa
Ọchịchọ maka smartwatch na-abawanye n'oge ekeresimesi karịa 100%
Ọ dị ka ụbọchị anyị na-akwụ ụgwọ maka ọrịre nke ngwaọrụ eji eyi dịka akwa. N'ụzọ ezi uche dị na ngwaọrụ ndị a enwere ọtụtụ ụdị na ụdị, na mgbakwunye ụfọdụ n'ime ọla mgbaaka dị ugbu a nwere ike ịgafe maka smartwatch (na esemokwu ha pụtara ìhè) na nke a na - akpata na mmụba na - abawanye na nke a.
Ma ọ bụ na ọ bụghị smart niile smart ka Apple ma ọ bụ Samsung na-ere, ụdị a ma ama na ahịa. Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ mgbe anyị na-atụle ịzụrụ smartwatch ma ọ bụ quantifying mgbaaka, ihe na-eme ka ahịa niile na-abawanye n'ihi ọnụahịa edozi na nhọrọ dịnụ.
Anyị nwere ike igosipụta na ọtụtụ n'ime ha chọrọ ama iji kesaa data ahụ ma nwee ọ enjoyụ zuru oke. Banyere njedebe nke afọ, idealo.es, otu n'ime ndị ọnụahịa kachasị mkpa na Europe, enyochala ewu ewu nke ndị a na-eyiri n'oge oge ịzụ ahịa ekeresimesi, na-arịba ama na ọchịchọ maka smartwatches na-arịwanye elu n'ọnwa Disemba. N'ezie, na 2015 ọchụchọ maka smartwatches mụbara site na 28,84% ma e jiri ya tụnyere ọnwa ndị ọzọ nke afọ na afọ gara aga uto a rịrị elu, yana a -achọ 102,6% karịa kwa afọ nkezi.
Na mba anyị, smartwatch kachasị amasị ndị Spanish afọ a bụ ndị nrụpụta Samsung, Sony, Huawei, Asus na Pebble. Kpọmkwem, n'elu ndepụta ahụ bụ Samsung Gear S2 Frontier, na-esote Sony SmartWatch 3 na Huawei Watch. Ndị a na-esote Huawei Watch 2, Samsung Gear S2 kpochapụwo, Asus ZenWatch 3 ma ọ bụ elekere Pebble Time Round. Ke akpatre ọnọdụ nke ogo dị ka ọmụmụ a rụrụ site ike, a ga-enwe Asus ZenWatch 2, Samsung Gear S na, n'ikpeazụ, Apple Watch Series 2.
Ndị ọrụ ahụ bụ ndị na-egwu egwuregwu na ndị nwere ike ibi ụdị ndụ siri ike nwere ike ịhọrọ onye ọzọ nwere ike ịga nke ọma n'oge ekeresimesi. Wristbands a na - enyocha ihe onye ọrụ na - eme kwa ụbọchị yana ya nkezi price bụ gburugburu 107 euro. Fitness trackers si Samsung, Garmin, Fitbit, Huawei, na Sony bụ ndị kasị ihe ịga nke ọma na Christmas oge. Ọrụ kacha chọọ tracker bụ Samsung Gear Fit 2, sochiri Sony SmartBand Talk SWR30 na Fitbit Charge 2. Ọnọdụ ndị ọzọ na listi a bụ ndị Fitbit Alta HR, Huawei TalkBand B2 Sony, Garmin vivosmart HR, Garmin vivosmart 3 na Polar A360 na-arụ ọrụ egwu. Ogo ahụ gụnyekwara HuaweiTalkband B1 nche na Garmin vivosmart HR +.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ọchịchọ maka smartwatch na-abawanye n'oge ekeresimesi karịa 100%
Ọhụrụ Garmin Vivofit 4 na-enye anyị ihe mgbe niile na ihuenyo na otu afọ nke batrị
Anyị nyochara ekweisi Nix na NewSkill